Murrashaxadda kaliya ee KULMIYE u soo sharaxay Hargeysa oo maanta wacdaro ka muujisay caasimadda | Somaliland.Org
Murrashaxadda kaliya ee KULMIYE u soo sharaxay Hargeysa oo maanta wacdaro ka muujisay caasimadda
November 7, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Murrashax Hodan Axmed Cabdilaahi, oo ah haweenayda qudha ee xisbiga KULMIYE u sharaxay Golaha deegaanka Caasimadda ayaa maanta sideed xafiis ka furatay afar degmo oo ku yaala Magaaladda Hargeysa. Kuwaasi oo ku kala yaala Koodbuur, 26 June, Gacan-libaax iyo Axmed Dhagax.
Furitaankii xafiisyadaasi oo dhammaantood xadhiga laga jaray, waxa ku wehelinayay Wasiir Ku xigeenka caafimaadka Marwo Nimco Xuseen Qawdhan, Guddoomiyaha Garabka Haweenka ee xisbiga KULMIYE Marwo Canab Cumar Illeeye iyo masuuliyiin kale.
Murashax Hodan Axmed Cabdilaahi oo la hadlaysay Taageereyaasheeda ayaa ugu horayn uga mahad celisay taageeradda ay la garab taagan yihiin, waxaanay balan qaaday in haddii ay ku soo baxdo doorashada deegaanka ay awooda saari doonto sidii ay ugu ololeyn lahayd horumarinta arrimaha bulshada ee caasimadda. Waxaanay ku dooday inay waayo- aragnimo u leedahay dawladaha Hoose oo ay ka shaqaynaysay muddo toban sanadood.
Hodan Axmed waxay intaasi ku daray inay ka soo shaqaysay inta badan dawlada Hoose ee shanta degmo ee magaaladdu ka kooban tahay iyadoo muddo dheer ahayd Xoghaye degmo.
“Waxaan ku dedaali doonaa haddii aan ku guulaysto doorashada inaan taageero weyn siiyo agoomaha SNM oo daryeel badan u baahan, aniguna aan xog ogaal u ahay xaaladooda nololeed, maadaama oo aan ahay Hooyo korisay carruur agoon ah oo uu ka dhintay Mid ka mid ah mujaahidiintii SNM,”ayay tidhi Marwo Hoddan Axmed Cabdilaahi.
Murashax Hodan waxay xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo uga mahad celisay saamiga ay ka siiyeen Haweenka dawladda iyo xisbiga KULMIYE-ba.
Murashaxaddu waxay Haweenka dalka u soo jeedisay inay codkooda soo saaraan haweenka ka sharaxan axsaabta iyo ururadda siyaasadda, waxaanay ku dooday in haweenku kaga wanaagsan yihiin maamulka dawladaha Hoose. Waxaanay tusaale u soo qaadatay Maayarkii Gabiley Marwo Khadra Xaaji Gaydh oo ay tilmaantay inay wax badan ka qabatay adeegyada bulshada mudadii ay xilka hayaysay.
“Haddii aanu ku soo baxno doorashadda, waxaanu dhiiri-gelin u noqon doonaa hablaheena jaamacadaha ka baxay oo u soo hiloobi kara inay ka qeyb qaataan talladda dalka,”ayuu tidhi Murrashax Hodan.
Sidoo kale, waxa halkaasi hadalo guubaabo iyo dhiiri-gelin iskugu jiray ka soo jeediyay Wasiir Ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Marwo Nimco Xuseen Qowdhan iyo Guddoomiyaha Garabka haweenka ee xisbiga KULMIYE Marwo Canab Cumar Ileeye.
Previous Post‘Reer Awdal wixii u kordhay waanu u haneynay, Anagana Ha Noo haneeya’Next PostTaageerayaasha Musharrax Cabdiraxmaan-Soltelco oo WAcdaro ka Dhigay Garoomada Hargeysa	Blog